E-Book With Sample Texts and Demo Audios. Please Test-Drive Before Subscribing
OTU ỤBỌCHỊ - 1 DAY
Okonkwọ bụ nwoke a maara nke ọma n’obodo toolu ahụ niile ma gafekwaa. Ebube ya sitere n’ike niile ọ kpara. Dị ka nwa okorọbịa dị afọ iri na asatọ, o wetarala ndi obodo ya ugwu site n’ịtụ Amalịnze nke a na-akpọ nwamba n’ala na mgba. Amalinze bụ ọkamgba ahụ nke ọ dịbeghị onye meriri ya n’ime afọ
Play Sample Audio below:
Signup below for full Text and Audio:
OTU IZUKA - 1 WEEK
N’ime onwe ya, obi na-atọ
OTU ỌNWA-1 MONTH
Ọ bụ n’afọ nke abụọ Okonkwọ gbachara ọsọ ndụ ka enyi ya nwoke Obierika bịara ileta ya. Ọ kpọ ụmụ okorọbịa abụọ bịa, nke ọ bụla bu akpa dị arụ n’isi ya. Okonkwọ nyeere ha aka butuo ibu ha n’ala. O were ya anya na ọ bụ ego ayọrọ jupụtara na ha.
Obi tọrọ Okonkwọ ụtọ ịhụ enyi ya. Obi tọkwara ndị nwunye ya na ụmụaka ya ụtọ nakwa ụmụ nwanne ya n’ikwunne ya na ndị nwunye ha mgbe Okonkwọ kpọrọ ha wee kọwaara ha onye onyeọbịa ya bụ.
Otu n’ime ha gwara ya na ọ ga-akpọrọ onye ahụ ka ọ gaa kelee nna ha.
Okonkwọ zara ya sị: “Eee, anyị na-aga otu ihu.” Ma, tupu ha agawa, ọ takwụnyere isi nwunye ya ihe na ntị.
Otu nwa nwa Uchendụ agwala ya na ndị ọbịa atọ bịara n’ụlọ Okonkwọ. Ya mere, ọ naara eche ịnabata ha. O kwere ha n'aka. Mgbe ha kwechara n’aka a,